नागरिक फिर्ता नलग्ने देशमाथि युएईको कडा नीति, अब के गर्छ युएई ? « Postpati – News For All
नागरिक फिर्ता नलग्ने देशमाथि युएईको कडा नीति, अब के गर्छ युएई ?
चैत ३० युएई । युएईको मानव संशाधन तथा ईमिरेटिजेसन मन्त्रालयले कोरोना संकटका बेला आफ्ना नागरिक फिर्ता लैजान नमान्ने देशलाई कारबाही गर्नका लागि अध्ययन थालेको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीले वर्तमान श्रम सम्झौतामा केन्द्रीत भएर कस्तो कदम चाल्ने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको खलिजटाइम्सले जनाएको छ ।
२०७६ चैत्र ३०,आईतवार को दिन प्रकाशित